Weerarka sariirta Hablaha Sunna Gudka ah oo ragga qaar Qaati ka taaganyihiin | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Raaxada Weerarka sariirta Hablaha Sunna Gudka ah oo ragga qaar Qaati ka taaganyihiin
Bulsha:- Niga waxaan ahay in mar dhaw guursaday inan yar oo suno gud ah, waxaan galnay tobo si aan ugu raaxeeysana guurkeena wax badan aan iska barano.
Sida caadada aheyd intee aan todobada ku jirnay ayaa gabadha aan qabo waxaad moodaa in ay horay ugu soo aalamiinteysay ciyaarta aniga iyo ayada na dhexmareeysa.
Inantan ayaa waxaad moodaa in ay dareen gaar ah ay xambaarsan tahay, mar haddii aan imaado aqalka waxa ay islamarkiiba ay bilaabeeysa ciyaarteena ayadoo gacmaha iyo faraha ila soo galeyo, marmarka qaar
ayaa waxa ay ii geeysataa dhaawacyo yaryar oo ka dhasha cidiyeheeda, waayo ayada isma oga waxaa ka tanbadiyay dareenka xad-dhaafka ay ee Illaahey ku maneeystay.
Wax badan ayaan maqli jiray hablaha soomaaliyeed sidaas dareenka uma qaataan lkn aniga waxa aan la kulmay inan iga yaabisay, weerarkeeda joogtda ah markii aan u dulqaadan waayay ayaan waxaan go'aansada in aa wadatashi lasameeyo dadka umuuraha ku taqasusay, waxaan la kulmay mid ka mid ah
qorayaasha HMN oo markaasi ku howlanaa shaqadiisa in uu bulshada ka haqabtiro waxyaabaha noocaasi ah.
Qoraangan Abdulkadir lagu macaabo ayaa waxaa usii dheer aqoon sexology waxa uuna iigula taliyay intii aan aadi lahaa farmashi ama aan isticmaali lahaa dawooyinka lagu xoojya ciyaarta sariirta ayaa waxaa uu ii sheegay farsamooyin kale oo aan sifiican ugu qancay, maadaama aan ahay nin dhalin yaro ah oo wali isheysta macquulna ay tahay dawooyinkan in ay saameeyn dibdanbe ah igu reeban sidaasi darteedna waan qaatay talada sxbkeey boggan shumis.net na waxku qora.
Waxa uu igu dhahay sidan "horta marka hore Illah ku shukri waayo gabdhaasi oo kale ragga waa ay ku duceystaan in ay helaan adigaana nasiib u yeeshay". waayo ragga qaar ayaa waxa ay ka sheegtaan xaasaskooda kuwaas oo aan sidii larabin aan ugu qeybqaadan ciyaaraha ka dhaca dusha sariirta.